Afhayeenka Al-Shabaab oo fariin culus u direy shacabka Waqoyi Bari Kenya - Jowhar Somali news Leader
Home News Afhayeenka Al-Shabaab oo fariin culus u direy shacabka Waqoyi Bari Kenya
Afhayeenka Al-Shabaab oo fariin culus u direy shacabka Waqoyi Bari Kenya
Afhayeenka guud ee Alshabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage ayaa fariin maqal ah oo soconeysa muddo labaatan daqiiqo ah ugaga hadlay gobolada Waqooyi Bari ee dalka Kenya iyo dowlada Kenyaba.
Sheekh Cali Dheere ayaa codkan uu soo duubay waxa uu ugu baaqay dadka ku nool gobolada Waqooyi Bari ee Kenya inay taageeraan ururka Alshabaab ayna la shaqeeyaan.
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa sheegay in dowlada Kenya ay gumeysi ku hayso dadka Muslimiinta ah ee dega gobolka Waqoyi Bari waxana uu sheegay in ay ku kalsoonaadaan dadnimadooda iyo aqoontoodaba ayna ka tashadaan gacan shisheeye.
“Muslimiinta ku nool gobolka Waqooyi Bari waxaan ugu baaqeynaa iney isku tashadaan, waxaana kalsooni ku qabnaa iney karti iyo aqoon ku filan u leeyihiin oo ay heli karaan macallimiin Muslimiin ah, dhaqaatiir Muslimiin ah iyo aqoonyahanno Muslimiin ah intaba, mana muuqato sabab ay ugu baahan yihiin gaalada Kenyaatiga ah, waayo, waxaa shaqo la’aan ah dhaqaatiirtii, Injineeradii iyo macallimiintii Muslimiinta ahaa ee u dhalatay gobolka Waqooyi bari. Dhallinyaradii jaamacadaha ka baxday ayaa shaqo la’aan ah, marka miyeysan ka mudnayn inaad iyaga fursad siisaan”ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
Sidoo kale Sheekh Cali Dheere afhayeenka Al-Shabaab ayaa ka hadlay dagaaladii ka dhacay Ceel Saliini,Lafoole iyo weliba Qoryooley.